Muujinta isleeg ka 91 ilaa 92 Bogga 19 - Fadlan U Gudub Dhamaadka Si Aad U Aragto Natiijooyin Badan
2 KOH + Na2CO3 → K2CO3 + 2NaOH
potassium hydroxide kaarboon Sodium kaarboon kaarboon-macdanta sodium hydroxide
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2KOH + Na2CO3 → K2CO3 + 2NaOH
Waa maxay xaaladda falcelinta ee KOH (potassium hydroxide) oo la falgasha Na2CO3 (sodium carbonate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa K2CO3 (potassium carbonate) iyo NaOH (sodium hydroxide)?
Dhacdada KOH ka dib (potassium hydroxide) waxay la falgashaa Na2CO3 (sodium carbonate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2KOH + Na2CO3 → K2CO3 + 2NaOH
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee K2CO3 (sodium carbonate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh K2CO3 (potassium carbonate) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaOH (sodium carbonate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaOH (sodium hydroxide) badeecad ahaan?
2KCl + Na2CO3 → K2CO3 + 2NaCl
chloride potassium kaarboon Sodium kaarboon kaarboon-macdanta chloride sodium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2KCl + Na2CO3 → K2CO3 + 2NaCl
Waa maxay xaaladda falcelinta ee KCl (potassium chloride) ee Na2CO3 (sodium carbonate)
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa K2CO3 (potassium carbonate) iyo NaCl (sodium chloride)?
Dhacdada KCl ka dib (potassium chloride) waxay la falgashaa Na2CO3 (sodium carbonate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2KCl + Na2CO3 → K2CO3 + 2NaCl
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaCl (sodium carbonate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaCl (sodium chloride) badeecad ahaan?
Muujinta isleeg ka 91 ilaa 92 Page 19